Siyaasi ka tirsan xisbigga SD oo aflagaado u geeystay soomaalida loo ganaaxay | Somaliska
Mid ka mid ah kuwa lugu sheego siyaasiinta xubina ka ah xisbigga xagjirka ah ee SD, ayaa dabayaaqadii toddobaadkii ina dhaafay waxaa lugu xukumay lacag ganaax ah ka dib markii uu soomaalida aflagaado bareer ah horey ugu geeystay.
Ninkan oo lugu magacaabo Jan Sohl bartiisa facebook-ga qoraal uu soo dhigay waxaa uu si bareer ah u beegsaday kooxda dhalinyarada soomaalida Iswiidhan ee dheesha ciyaarta barafka lugu dil ciyaaro ee xeegadda. Ninkan oo adeegsaday ereyo aflagaado ah ayaa kooxda soomaalida ee barafka oo ciyaar la laheyd dalka Jeken ku sheegay ineey yihiin kuwo wanaagsan dilka iyo kufsiga ulaha ay ku ciyaarayaana ay agtooda ka tahay xabado.
Ninkan ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo heeysto waxaana uu sheegay in maxkamadda ay qoraalka bartiisa facebook soo dhigay u fahantay si kale. Qoraalka uu xag jirkani bartiisa soo dhigay ayuu u adeegsaday sawirka kooxda soomaalida ee ciyaarta xeegadda.Ugu dambeyntiina ninkan ayaa qoraalo uu sidoo kale horey u soo dhigay baraha bulshadda ku sheegay in xaafadaha muslmiinta Iswiidhan la geeyo madaxyo doofaar.
Noorweey oo qoraal aan nuxur badan laheyn ka soo saartay booqashaddii Soomaaliya
Ciidammo caalami ah oo dhoolatus meleteri ku sameeynaya magaaladda Göteborg